Sunday November 28, 2021 - 09:33:42
Wararka ka imaanaya gobolka Jubbada hoose ayaa sheegaya in weeraro lagu qaaday saldhigyo ay ciidamada shisheeye iyo maleeshiyaadka Soomaali ah uga sugnaayeen Jaziiradda Kudhaa.
Xoogag hubaysan ayaa xalay dhowr jiho ka weeraray saldhigga maleeshiyaadka maamulka 'Jubbaland' ee deegaanka Kudhaa, dadka deegaanka ayaa sheegay in dagaal culus uu ka dhacay halka loo yaqaan Afriik.
Muddo ku dhow hal saac oo ay dagaallo socdeen kadib ayay xoogaga jihaadiga ah usuurtagashay in ay la wareegaan saldhigga Afriik.
ilo wareedyo ayaa sheegaya in markii dambe ay dagaalka kusoo biireen ciidamada melleteriga Kenya ee sadhigga ku leh jaziirada Kudhaa, dadka deegaanka ayaa sheegay in ay maqlayeen jugta madaafiic iyo rasaas ay labada dhinac is dhaafsanayeen.
Wararka ayaa intaas ku daraya in ciidamada Kenya ay madaafiic ku garaaceen dhulka howdka ah ee ku dhow deegaanka Kudhaa, illaa iyo hadda lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalladii xalay ka dhacay cirifka Koonfureed ee Soomaaliya.